बाख्रा पालन (Goat Farming)
रामेश्वर सिंह पाण्डे/कृषि पत्रिका
१.१ व्यावसायिक बाख्रापालनको आवश्यकता
नेपालका अधिकांश परिवारहरूको जीविकोपार्जनको आधार नै कृषि भएकोले कृषकहरू खेतीपातीसँगै पशुपालन पनि गर्दैआएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पारिवारिक आयआर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा पशुपालनलाई मानिन्छ । पशुपालन व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब ३६ प्रथितशत रहेको छ जसमध्ये पशुपालन (गाईभैंसी, भेडाबाख्रा, कुखुरा, माछा आदि)को योगदान २८ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालनको कुल योगदान मध्ये बाख्रापालनको योगदान करिब १२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कुल परिवार सङ्ख्या ५६,५९,९८४ मध्ये करिब २८ लाख कृषक परिवारले खसीबाख्रा पाल्ने गरेकाछन् । तर औसत कृषकहरूले आर्जोगर्जो टार्ने उद्देश्यले दुईचार वटामा बाख्रा पाल्ने गरेका छन् । नेपालमा एक बाख्रा पालक कृषकले सरदर ३.२ वटा खसीबाख्रा पाल्ने गरेकाछन् । यी बाख्रा पालकहरू मध्ये केवल १० प्रतिशतले मात्र दसवटाभन्दा बढी खसीबाख्रा पाल्ने गरेको अनुमान छ ।
नेपालमा मुख्यतः पशुजन्य पदार्थहरूको स्रोतहरूमा गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, सुँगुर, कुखुरा आदि हुन् । दूधको प्रमुख स्रोत गाई र भैंसी हुन भनें मासुको स्रोतहरूमा भैंसी, बाख्रा, भेडा, सुँगुर, कुखुरा आदि पर्दछन् । आर्थिकरूपमा देश सबल हुँदै जाँदा, मानिसहरूको आयआर्जनमा वृद्धिहुँदै जान्छ र दैनिक खानपान तथा भोजनका परिकारहरू पनि केही परिवत्र्तन हुन्छन् अनि खानामा पशुजन्य पदार्थको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । दुग्धजन्य पदार्थभन्दा मासुजन्य पदार्थको उत्पादन केही कम तथा अप्राप्यभएकोले मासुजन्य पदार्थ केही मँहगो पनि हुन्छ । धेरै जसो नेपाली परिवारहरू माशांहारी छन् । धार्मिक तथा जातीय आधारमा राँगा, सुँगुर, कुखुराको मासु केही समुदाय विशेषले त्यति रूचाएको पाइन्न तर मांसाहार गर्नेहरू मध्ये खसीको मासु सबै धर्म, जात, समुदायका मानिसहरूले रूचाएर खाने गरेकाछन् । कतिपय समुदायमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गर्न बलीका लागि पशु र भोजका लागि मासु नभई हुन्न ।
नेपालमा चाहिने मासुको माग पुरा गर्न ठूलो परिणाममा जीवित पशुहरू विशेषतः भारत र तिव्वतबाट आयात गरिन्छ । एक अध्ययन अनुसार वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँका मासुको कारोबार हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत भन्दा बढी खसीको मासुले ओगटेको छ । आ.व. २०६६÷६७ मा नेपालमा रु ५३ करोड ३३ लाख बराबरको मासु आयात भएको थियो । खसीको माग पूरा गर्न भारतबाट वर्षेनी करिब ५ लाख जीवित खसीहरू भित्राइन्छन् र विशेषतः दशैंको अवसरमा ठूलो परिणाम च्याङ्ग्राहरू तिव्वतबाट पनि आयात गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा नेपालमा भारतबाट ४७६,६०० गोटा खसी र तिब्वतबाट ९,७०० भेडा आयात भएको थियो र सोही वर्ष रु ५३ करोड ३३ लाख बराबरको मासु आयात भएको देखिन्छ । हालै हिफर नेपालले गरेको अध्ययनबाट नेपालमा वर्षेनी करिब ६ लाख खसीको अभाव रहेको छ र यो सङ्ख्या वर्षेनी बढदै गइरहेको छ । यसरी आफ्नै देशमा व्यावसायिक बाख्रापालनको विकास गरेर आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सृजना गर्ने प्रशस्त औसर उपलब्ध छन् ।
१.२ नाफामूलक व्यवसायको रूपमा बाख्रापालन
नेपालमा पालतु पशुहरू मध्ये बाख्रा सबै भन्दा लोकप्रिय जन्तु हो । गाईभैंसी, बङ्गुर, कुखुरा आदिको दाँजोमा लगानीको प्रतिफल बढी हुने भएकोले अन्य पशुपक्षीको दाँजोमा बाख्रापालन व्यवसाय बढी फायदामन्द हुन्छ । हिफर नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रति किलो मासु उत्पादन लागत रु १५० देखि २९३ पर्दछ । जबकि हालको बजार मूल्य रु ६०० देखि ७०० प्रति किलो रहेको छ । यसरी खसीबाख्रा पालन गर्ने व्यवसाय निकै नाफामूखि व्यवसाय हो ।
सानो ठाउँमा पनि बाख्रा पाल्न सकिने, चाहिएको बेला तुरन्त बेचेर नगदी पाउन सकिने भएको हुँदा प्रायः ग्रामीण कृषक परिवारहरूले बाख्रा पालन गरेको पाइन्छ । बाख्रा बहुपयोगी पशु हो, यसबाट मासु, दूध, पश्मिना, छाला उपलब्ध हुनुका साथै खेतीको लागि बड्कौला र मूत्र पनि पाइन्छ । हिमाली भेगमा च्याङ्ग्राहरू मालसामान ढुवानी गर्न पनि उपयोग गरिन्छन् । परापूर्वकालदेखि नै देवी देउताहरूमा बोकाको बली दिने प्रथा चलिआएको हुनाले बाख्रा पाल्ने चलन निकै पुरानो हो ।
नेपालमा बाख्राहरू साना किसानहरूले थोरै सङ्ख्यामा तथा पहाडमा घुम्तीगोठ प्रणाली अन्तरगत ठूलो बथानमा बढी सङ्ख्यामा बाख्रा च्याङ्ग्रा पाल्ने गरिन्छ । नेपालमा बाख्राको दूध उत्पादनले नगन्य स्थान लिएको छ । बाख्राको दूध प्रायः खाइन्न तर पनि घुम्तीगोठमा बाख्राको दूधबाट दहिमही बनाउने चलन छ । नेपालमा मासुकोलागि खसी बोका काट्दा छाला काट्ने चलन छैन । त्यसर्थ बाख्राको सङ्ख्याको अनुपातमा बाख्राको छाला उत्पादन अति कम रहेको छ । बाख्रापालन व्यवसाय हाल दिनानुदिन लोकप्रिय हुँदै गएको हुँदा निम्नस्तरमा किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न बाख्रापालन व्यवसायमा अझ बढी जोड दिनु परेको छ । हाल शिक्षित तथा युवावर्गले व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन व्यवसाय फस्टाइ रहेको छ । व्यावसायिक बाख्रापालनबाट निम्न फाइदाहरू हुन्छन्ः
ड्ड बाख्रापालन व्यवसाय थोरै पूँजीबाट पनि शुरू गरी छोटा समयमै आम्दानी दिनेगर्छ । बाख्रा चाँडो वयस्क हुने, वर्षमा दुई पटकसम्म ब्याउने र एकपटकमा २–३ वटासम्म बच्चा जन्माउने हुँदा यिनीहरू आर्थिक रूपमा निकै लाभदायक हुन्छन् ।
ड्ड गाउँ–शहर, सुगम–दूर्गम सबै ठाउँमा बाख्रापालन र बाख्राजन्य पदार्थको विक्री गर्न सकिन्छ । जीवित पशुको रूपमा खसीबोका बिक्री गरिने हुँदा बजारबाट टाठा तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि सफलतापूर्वक बाख्रा उत्पादन व्यवसाय गर्न सकिन्छ ।
ड्ड सानो आकारको शरीर र सुधो जनावर भएकोले ठूलो लगानीमा गोठघर बनाउनु पर्दैन घरको बरन्डा, पिँढी, दलान आदिमा बाँधेर पनि बाख्रापालन गर्न सकिन्छ ।
ड्ड मुख्य खाद्यान्यबाली नहुने रुखो, काम नलाग्ने, पोथ्य्रान, झाडीबुट्यान भएको जग्गामा बाख्रापालन सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ ।
ड्ड भान्साको जुठोपिठो र स्याउलाको भरमा बधुँवा प्रणालीमा पनि बाख्रापालन गर्न सकिन्छ ।
ड्ड खसीको मासु सबैले उत्तिकै महत्वका साथ खाने गर्छन्, कुनै जातीय वा धार्मिक बन्देज पाइन्न । बाख्राको दूध पनि सुपाच्य हुनुका साथै कुनै पनि किसिमका प्रतिकूल प्रतिक्रिया रहित हुन्छ ।
ड्ड खसी बोकाको मासुमा हानीकारक कोलेस्ट्रल कममात्रामा पाइन्छ । खसीको मासुको माग तथा बजार व्यवस्था अति राम्रो भएकोले बिक्रीको लागि बजारको समस्या रहेको पाइन्न ।
ड्ड अन्य पशुजन्य व्यवसयको दाँजोमा बाख्राबाट वर्षैभरि आम्दानी लिन सकिन्छ र भाले तथा पोथीको मूल्य पनि करिब करिब उस्तै हुन्छ ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न तथा मासु, दूध तथा जीवित पशुमा आधारित वाख्रापालन लाई एक उद्योगकोरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
ड्ड बाख्राहरूले रेसादार तथा रुखो घाँसपात मनपराउने हुँदा अष्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड आदि देशहरूमा घाँसखेतका झारपात तथा पोथ््य्रानहरू नियन्त्रणमा पनि उपयोगी सावित भएको छ ।
१.३ बाख्रापालक व्यवसाय शुरु गर्नु अगावैका पूर्वाधारहरू
बाख्रापालन व्यवसायबाट लाभ लिनका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अघि एक सफल व्यवसायीले निम्न बुँदाहरूमा गम्भिरतापूर्वक मनन, चिन्तन गर्नुपर्छः
ड्ड बाख्रापालन व्यवसाय पूर्णकालिन व्यवसाय हो, बाख्रहाहरूसँग जति धेरै समय बिताउन सक्यो, रेखदेख गर्न सक्यो उति असल । यो व्यवसाय अरूको देखासिखी गरेर लहैलहैमा गर्नुहुन्न । बाख्रापाल्न शुरु गरिसकेपछि वर्षा, जाडो, गर्मी, हुरीवतास, अल्छि लाग्यो, फुर्सद मिलेन भन्न पाइन्न । कम्तिमा पनि दिनको दुईपटक आफैले बाख्राहरूको रेखदेख गर्नुपर्छ, अरूको भरमा मात्र छाड्नु हुन्न । सञ्चालकले सकेसम्म बढी समय बाख्रा तथा ज्यामीहरूसँग बिताएर रेखदेख, नीरिक्षणका साथै अन्तरक्रिया गरेर बाख्रा तथा कर्मचारीहरूसँग आत्मिय सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ।
ड्ड बाख्रापालन व्यवसाय शुरु गर्नु भन्दा अगाडि बाख्रासम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिनु उपयोगी हुन्छ । यसका साथै सम्बन्धित सरकारी तथा नीजि निकायहरू÷बाख्रा फार्म÷स्रोतकेन्द्र तथा हाटबजारहरूको अवलोकल गरी बाख्रापालन सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा जानकारी लिनुपर्छ ।
ड्ड व्यवसाय शुरु गर्नु अघि एक विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ जसमा विस्तारमा व्यवसायको लक्ष, उद्देश्य, कार्यक्रम÷भावी योजनाहरू, आर्थिक विश्लेषण÷आय–व्ययको योजना, आवश्यक जग्गा (गोठघर, भौतिक संरचना, मेसिन औजार घाँसखेती, चरन आदि), पुँजी (नगद तथा ऋण), बाख्राको स्रोत केन्द्र, बजार, स्वास्थ्य सेवा आदिको प्रारुप योजनावद्ध रूपमा तयार गर्नुपर्छ र निर्धारित लक्ष तथा उद्देश्य समयमा पुरागर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
ड्ड सफल व्यवसायीमा व्यवस्थापकीय गुण हुनुका साथै सचेत, जागरुक, आत्मवल भएको लगनशील, शिप, जाँगर र महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ । व्यवसायी समस्या आईपरेका नआत्तिने, आउनसक्ने सम्भाव्य समस्याको विश्लेषण तथा सो को निदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ । उपलब्ध स्रोत, साधन, नीति नियमसम्बन्धी जानकारी हुनुका साथै उपलब्ध औसरको पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
ड्ड ग्राहक तथा उपभोक्ताको माग अनुसार उच्चगुणस्तर तथा मौलिक उत्पादन उपलब्ध गराउन सक्ने सक्षम व्यवसायर व्यवसायीले छिट्टै प्रगति गर्न सक्छन् ।
ड्ड सबै व्यवसायमा केही न केही जोखिम हुन्छ नै । बाख्रा अझ जीवित प्राणी भएकोले यो व्यवसाय अझ जोखिमपूर्ण छ । तर जोखिम न लिई फायदा पनि लिन सकिन्न ।
१.४ बाख्रापालन अन्तरगत कस्तो व्यवसाय अपनाउने?ः
बाख्रापालन व्यवसाय विशेषत गरी खसीबोका उत्पादनका लागि मात्र हुने गरेएतापनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन गर्दा एक निश्चित बाख्राजन्य उत्पादनलाई विशेष रूपमा अपनाउन सकिन्छ । जस्तै खसी उत्पादन, बोका उत्पादन, दूध उत्पादन, पश्मिना आदि ।
ड्ड खसी उत्पादनः खसी बनाएर मासुका लागि जीवितै खसी बिक्री गर्नका लागि नेपालका सबै ठाउँ उपयुक्त छन् । सानो आकारमा स्थानीय बजारको माग आपूत्र्तिका लागि बाख्रापालन व्यवसाय गाउँघर मै गर्न सकिन्छ तर ठूलो अनुपातमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन व्यवसाय गर्दा शहर बजारमा सजिलै आपूत्र्ति गर्न सकिने, यातायातको सुविधा, चरन आदिको व्यवस्थाभएको ठाउँको छनौट गर्नुपर्छ । मासु उत्पादनका लागि खसीलाई एक डेढ वर्षसम्म पलिन्छ । प्राय सबै उपलब्ध जातका बाख्राहरू खसी बनाउन उपयुक्त भएतापनि जमुनापारी, बोअर, बारबेरी, तराई–बाख्रा, खरी आदि बाख्रा पालेर वढी फायदा लिन सकिन्छ ।
ड्ड बोका उत्पादनः नेपालमा प्रायः धार्मिक कार्य सम्पन्न गर्न पशुहरूको बलि दिइन्छ । त्यसमा पनि बोकाको बलि निकै प्रचलित छ । त्यस्तै दशैकोअवसरमा पनि सप्तमीको दिन बोका काट्ने चलन छ । शक्तिपिठ नजिकै जहाँ धार्मिक आस्था भएका मानिसहरू बोकाको बलि दिन्छन् त्यस्तो ठाउँ वरपर बलिको लागि बोकापालन व्यवसाय राम्ररी फस्टाउन सक्छ । उदाहरणका लागि गोरखाको मनकामना र काठमाडौंको दक्षिणकालीको मन्दिरमा दिनहुँ ठूलो सङ्ख्यामा बोकाको बलि दिइन्छ । यसरी बलि दिनका लागि कालो रङ्गको ६–९ महिना उमेरका बोकाहरू बढी उपयुक्त हुन्छन् । बलिकै लागि कालो रङ्गको बोका उत्पादन गर्ने लक्ष राखेर पनि बाख्रापालन व्यवसाय शुरु गर्न सकिन्छ । बोका उत्पादनका लागि स्थानीय जातका, एक पटकमा धेरै पाठापाठी ब्याउने, सानो जीउडालको खरी, बङ्गाल जातका बाख्रा बढी उपयुक्त हुन्छन् ।
ड्ड दूध उत्पादनका लागि बाख्रापालनः बाख्राको दूध, दही, आइसक्रिम तथा अन्य परिकार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पनि बाख्रा पाल्न सकिन्छ । विदेशमा दूध दिने जातका बाख्रा पालेर बाख्रोको दूधबाट चिज बनाइन्छ । नेपालमा बाख्राको दूधबाट चिज बनाउने व्यवसाय हालसालै चित्लाङ, मकवानपुरमा शुरु गरिएको छ । यस्तो चिज उत्पादनको व्यवसाय देशका अन्य भाग विशेषतः पर्यटकहरूको चाप बढी भएका जिल्लाहरूमा सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । दूध उत्पादनका लागि सानन, नुवियन आदि जातका बाख्रा उपयुक्त मानिन्छन् ।
ड्ड पश्मिना उत्पादनः नेपालमा पश्मिनाका कपडा बनाएर ठूलो परिणाममा निकासी गरिन्छ । पश्मिनाका कपडाहरू धेरै महँगा हुन्छन् । तर यस्ता पश्मिनाको कपडा बनाउन चाहिने पश्मिना रौंको ९५ प्रतिशत हिस्सा विदेशबाट आयात गरिन्छ । पश्मिना तथा मोहेअर उत्पादनका लागि हिमाली क्षेत्रमा अङ्गोरो, कश्मिर आदि जातको बाख्रा उपयुक्त हुन्छन् । पश्मिना जाताका बाख्रापालन उद्योग सञ्चालन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
ड्ड ढुवानीको साधनः यातायात नपुगेका दूर्गम हिमाली क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि बाख्राबाट मालसामानहरूको ढुवानी गरिन्छ । सिन्हाल, च्याङ्ग्रा ढुवानी प्रयोजनका लागि उपयुक्त मानिन्छन् ।
ड्ड प्रजनन सेवाः गाउँघरमा थोरै बाख्रा पाल्ने कृषकहरूले आआफ्ना बाख्राका लागि प्रजननको बोका पाल्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुन्न । सानो सङ्ख्यामा धेरै परिवारले बाख्रा पालन गरेको गाउँबस्तीहरूमा प्रजननका लागि उन्नत जातका बोकाहरू व्यवसायको रूपमा पालन गर्न सकिन्छ । बोका लगाए बापत केही शुल्क लिएर बोकापालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रजननका लागि बोका पालदा उन्नत जातका बोकाहरू पाल्नुपर्छ ।
1.5 नेपालमा खसीबाख्राको तथ्याङ्क
विश्व खाद्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा करिब ८६ करोड खसीबाख्राहरू पालिन्छन् । खसीबाख्राहरू धरतीको सबैभन्दा गरम जलवायू भएको मरुभूमि क्षेत्रदेखि लिएर अति चिसो जलवायू भएको हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि बाख्राहरू पालिन्छन् । विश्वमा ५७० भन्दा बढी जातका बाख्राहरू पालिन्छन् र सबैभन्दा बढी जातिय विविधता अफ्रिकी महादेशमा पाइन्छ । विश्वमा भएका कुल खसीबाख्राको सङ्ख्याको करिब ९० प्रतिशत विकासशील देशमा पाइन्छ । विश्वमा सबै भन्दा बढी बाख्रा चीन, भारत, नाइजेरिया, सूडानमा पालिन्छ । मांशाहारीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले खाने मासु खसीबाख्राको हो । विश्वका करिब ७० प्रतिशतले मांंशाहारीहरूले खसीबाख्राको मासु रूचाउने गरेका छन् ।
नेपालमा आ.व २०६७÷६८ मा कुल ९१,८६,४३८ खसीबाख्रा भएको अनुमान छ । नेपालको कुल बाख्रामध्ये हिमालमा १२,००,२३९ (१३.१ प्रतिशत), पहाडमा ४६,५७,२७९ (५०.७ प्रतिशत) र तराईमा ३३,२८,९२० (३६.२ प्रतिशत) रहेको अनुमान छ । नेपालमा बाख्राको सङ्ख्या ३.४ प्रतिशतको दरले प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ ।
1.6 नेपालमा बाख्रापालनका प्रचलित विभिन्न प्रणालीहरू:
बाख्रापालनको प्रणाली खास क्षेत्रको भौगोलिक वातावरण, त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध हुने घाँसपात÷आहारा, बाख्राको जात तथा किसिम, कृषकको आर्थिकस्तर, उपलब्ध जनशक्ति तथा कति सङ्ख्यामा बाख्रा पालिने हो त्यसमा निर्भर गर्छ । बाख्रा विपन्न वर्गहरूले एउटा देखि व्यावसायिक उद्देश्यले हजारौंको खङ्ख्यामा पनि पालन गर्न सकिन्छ । नेपालको तराई क्षेत्र, पहाड तथा हिमालमा बाख्रा बेग्लाबेग्लै पद्धति अनुसार पालिने गरिन्छ । हाल नेपालमा बाख्रापालनका निम्न प्रणालीहरू प्रचलित छन्ः
• पगाहा प्रणालीः यस प्रणालीमा एक, दुई वटा बाख्रा पालन गर्ने कृषकहरूले बाख्रालाई करीब २०—३० फिट जति लामो डोरीले बाँधेर खेतबारी, बाटा छेउछाउमा चराएर पाल्ने गर्छन । यसरी डोरीले बाँधेर पाल्ने प्रणालीलाई पगाहा भन्दछन् । बाख्रालाई राती वा बिहानबेलुका घरको बरन्डा पिँढी आदि स्थानमा बाँधेर राख्ने गरिन्छ । बाख्रालाई भान्साघरमा उबे्रको खाना, तरकारीको बोक्रा आदि आहारा, दिने गरिन्छ । नेपालको तराई तथा पहाडी क्षेत्रहरू विशेषतः शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्ग तथा सानो सङ्ख्यामा बाख्रा पल्दा यो तरिका अपनाइन्छ । यस प्रणाली अन्तरगत ठूलो सङ्ख्यामा बाख्रा पाल्न सम्भव हुन्न ।
• बधुवा प्रणालीः यस प्रणालीमा खसीबाख्रालाई बङ्गुर वा कुखुरा पाले जस्तै थलोमै घाँस आहारा दिएर पाल्ने गरिन्छ । खसीबाख्रा धेरैजसो समय खोरमै रहन्छन् तर घुमफिरका लागि खोरसँगै एक खुला चउरको व्यवस्था गरिन्छ । साधारणधारणतया १०० खसीबाख्राका लागि १० गुना २० मिटरको चउर भए पुग्छ । यस्तो चउरको छेउछाउमा छाँयादार डालेघाँसको बिरुवा रोपिदिएमा छहारी तथा स्याउला दुबै पाउन सकिन्छ । यो प्रणाली तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्रचलित छन् । यस प्रणाली अन्तरगत सानो सङ्ख्याको साथसाथै उचित आहारा तथा घाँसको व्यवस्था गरेर व्यावसायिक रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ ।
• अर्ध–स्वच्छन्द प्रणालीः यस प्रणालीमा बाख्राहहरूका लागि विभित्र प्रकारका आवश्यक गोठहरू बनाइन्छन् । दिनको समय करिब ६–८ घण्टा चरन वा वन÷जङ्गलमा चराइन्छ । खसीबाख्राहरू उमेर, शारीरिक अवस्थाको आधारमा विभिन्न समूहमा बाँडिएका हुन्छन् । चरनमा खसीबाख्राहरू एक निश्चित अवधिसम्म स्वच्छन्द रूपमा चर्ने गर्दछन् । चरनमा पानी पिउन ठाउँठाउँमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस प्रणालीमा बाख्राहरूको आवश्यकता अनुसार थप आहारा, औषधि उपचार, नश्ल सुधार, आदिको व्यवस्था आवश्यकता अनुसार फार्ममा नै उपलब्ध गराइन्छ । नेपालमा पालिने बाख्राहरू मध्ये करिब ६५ प्रतिशत यस्तै अर्धस्वक्षन्द प्रणाली अन्तरगत पालिने अनुमान छ । धेरैजसो व्यावसयिक बाख्रा फार्ममा यस्तै आधुनिक प्रणाली अपनाउँनु उपयुक्त हुन्छ । यो प्रणाली नेपालको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा प्रचलित छ । यस प्रणाली अन्तरगत सानो सङ्ख्याको साथसाथै उचित चरनको व्यवस्था गरेर व्यावसायिक रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ ।
• घुम्तीगोठ प्रणालीः हिमाली भेगमा पशुहरू चराउने ठूलठूला खर्कहरू हुन्छन् । यस्तो खर्कहरूमा मौसम अनुसार बाख्राभेडा लगायत अन्य पशुहरू चौंरी, गाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दै चरनमा चराएर पालन गरिन्छ । यसरी चरनमा चराउँदा गर्मी मौसम अर्थात् हिउँ नपर्ने समयमा उच्च लेक, ४०००–५००० मिटरसम्म उचाइँमा र शरद ऋतु, अर्थात् लेकमा हिउँ पर्न लागेपछि पशुहरूलाई तल्लो भेगमा अवस्थित खर्कहरूमा झारिन्छ । यस प्रणालीमा बाख्रा र भेंडाको बथान एउटै पनि हुनसक्छ । यसरी घुम्ती प्रणालीमा बाख्रा पालनगर्दा बाख्राको लागि कुनै खास गोठघर बनाइन्न । सानासाना तथा अशक्त पाठापाठीहरूलाई गोठालाहरू बस्ने मान्द्रोले बनाइएको अस्थायी छाप्रोमा बाँध्ने गरिन्छ ।
1.7 नेपाली जातका बाख्राहरू:
नेपाली मूलका बाख्राहरूको विशेषता
नेपाली मूलका बाख्राहरू कठिन परिस्थिति तथा कमसल खालको आहारा खाएर पनि राम्रो उत्पादन क्षमता गरेका हुन्छन् । यिनीहरू सालाखाला वर्ष दिनको उमेरमा बोका खोज्छन् । एक पटकमा १–३ वटासम्म पाठापाठी ब्याउँछन् र वर्षमा दुईपटक तथा दुई वर्षमा पाँच पटकसम्म ब्याउँछन् । बाख्राहरूको आयु करिब १५ वर्षको हुन्छ । नेपालमा पालिने बाख्राहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चार वर्गमा बाँड्न सकिन्छ ।
• उच्च पहाडी भेगमा पालिने बाख्राः सिन्हाल, च्याङग्रा,
• तल्लो पहाडी भेगमा पालिने बाख्राः खरी,
• तराई क्षेत्रमा पालिने बाख्राः तराई बाख्रा ।
a) तराई मूलका बाख्राहरूको वर्णन
• तराई बाख्राः नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने यी अवर्णित जातका बाख्रा हुन् । भारतेली जातको जमनापारीको गुण यसमा केही प्रतिशत आएको हुँदा यिनीहरूको केही लामो कान, केही लामो खुट्टा हुन्छ । यिनीहरू मझौला आकारका र विभिन्न रङ्गका हुन्छन् । बाख्राको कुल सङ्ख्यामध्ये तराईबाख्राको सङ्ख्या करिब ८ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । यिनीहरूको शारीरिक तौल करिब ३०–४० किलो (बोका) र २०–२५ किलो (बाख्रा) को हुन्छ । यिनीहरू सालाखाला एकवर्षको उमेरमा गर्भधारण गर्छन र एक पटकमा सरदर दुईवटा बच्चा ब्याउँछन् । यिनीहरूले १२६ दिनको बेतमा ८७ लिटर दूध दिन्छन् । यस जातको बाख्रा विशेषगरी खसी बोका उत्पादनको लागि पालिने गरिन्छ ।
b)खरी वा औले बाख्राः
नेपालको मध्य तथा तल्लो पहाडी भेगमा यस जातका बाख्रा पालिन्छन् । नेपालमा पालिएका कुल बाख्राको सङ्ख्या मध्ये आधा भन्दा बढी खरी जातका बाख्रा पालिन्छन् । सानो आकारको,े कालो तथा खैरो रङ्ग गरेका यस जातका बाख्राले धेरै सङ्ख्यामा पाठापाठी जन्माउन सक्ने क्षमता हुन्छ । यस जातको बाख्रामा आपूmले खाएको आहारालाई मासुमा बदल्न सक्ने क्षमता निकै राम्रो हुन्छ । मासु खाँदिलो तथा स्वादिलो मानिन्छ । रोगव्याधी कम लाग्ने, कमसलखानपान र प्रतिकूल वातावरणमा पनि यिनीहरूले राम्रो उत्पादन दिन सक्छन् । वयस्क बोका ३०– ४० किलो वजन गरेको हुन्छ र बाख्रा २०–३० किलोका हुन्छन् । यस जातको बाख्रीले दुई वर्षमा तीन पटक र एक पटकमा २ देखि ४ वटासम्म बच्चा जन्माउँछन् । यिनीहरूले ८–१० महिनाको उमेरमा बोका खोज्छन् । यिनीहरूले १०६ दिनको बेतमा ५९ लिटर दूध दिने गर्छन् ।
c) उच्च पहाडी भेगमा पालिने बाख्राः सिन्हाल, च्याङग्रा,
सिन्हालः उच्च पहाडी भेगमा सिन्हाल जातको बाख्रालाई भेडासँगै घुम्तीगोठमा पालिन्छ । बाख्राको कुल सङ्ख्यामध्ये सिन्हालको सङ्ख्या करिब ३५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । जङ्गली घाँसपातलाई आहाराको रूपमा सदुपयोग गर्ने क्षमता यिनीहरूमा अति राम्रो हुन्छ । यिनीहरू ठूलो आकारका लामालामा सिङ्ग गरेका हुन्छन् । वयस्क बाख्राको शारीरिक तौल करिब ४०–४५ किलो बोका र ३०–४० किलो (बाख्रा)को हुन्छ । यी बाख्राहरूले ज्यादा गर्मी तथा वर्षा सहन सक्दैनन् । जाडोबाट बच्न यस जातको बाख्राको शरीरमा पनि केही लामो लामो रौं हुन्छ, जसको भित्री भागमा मसिनो भुत्ला उम्रिएको हुन्छ, यस भुत्लालाई पश्मिना भन्दछन् । सिन्हाल बाख्राबाट वर्षमा १००–१२० ग्राम जति पश्मिना पाउन सकिन्छ । सिन्हाल बाख्राहरू करिब १५ महिनाको उमेरमा गर्भधारण गर्छन र वर्षमा एक पटकमात्र ब्याउँछन् र एक बेतमा एउटा बच्चामात्र जन्माउँछन् ।
च्याङग्राः च्याङग्रा नेपालको हिमाली क्षेत्रका चिसो, अर्धमरुभूमि जस्तो ठाउँहरू विशेषतः हिमालपारी मनाङ्ग, मुस्ताङ् आदि जिल्लाहरूमा मात्र पालिन्छन् । बाख्राको कुल सङ्ख्यामध्ये च्याङ्ग्राको सङ्ख्या करिब ६ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । यसको शरीरभरि १५–२० से.मी. लामो रौंले ढाकेको हुन्छ । यसै लामो रौं भित्र मसिनो भुवादार रेशमी भुत्ला पाइन्छ, जसलाई पश्मिना भनिन्छ । यस्तो रौंले च्याङग्राको शरीरलाई न्यानो पारेर राख्छ र जाडो सकिए पछि झर्न लाग्छ । पश्मिना निकै मुल्यवान हुन्छन् । यसबाट उच्च कोटीको गरम कपडाहरू, शाल, गलबन्दी पच्छौरा आदि बनाइन्छ । कृषकहरू जाडो बिते पछि च्याङ्ग्रालाई काँइयोले थक्रिएर पश्मिना सङ्कलन गर्छन् । एउटा चयाङग्राबाट वर्षमा १५०–२५० ग्रामसम्म पश्मिना पाउन सकिन्छ । तिब्वतेली मूलका च्याङग्राहरू केही ठूलो आकारका हुन्छन् । यिनीहरूको शारीरिक तौल ७० किलोसम्मको हुन्छ । नेपाली च्याङग्राहरू केही सानो जीउडालका हुन्छन् । यिनीहरूको शारीरिक तौल सरदर ३५–४० किलो बोका र २७–३० किलो बाख्राको हुन्छ । च्याङग्राहरू ढिलो वयस्क हुन्छन् । एक डेढ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक बाली लागि वर्षमा एक फेर र एउटा मात्र बच्चा ब्याउँछन् । उच्च हिमाली भेगमा च्याङग्राहरूलाई भारी बोकाउन पनि प्रयोग गरिन्छ । यिनीहरूले ७–८ किलो सामान बिशेषतः नुन, चामल बोकर हिँड्न सक्छन् ।
1.8 विदेशी मूलका बाख्राहरू:
विदेशी मूलका बाख्राहरूको विशेषताः
विदेशी मूलका बाख्राहरू मासु तथा दूध उत्पादनका लागि निकै प्रशिद्ध छन् । नेपाली हावापानीमा फस्टाउन सक्ने विदेशी मूलका जमुनापारी, बारबेरी, बोर, आदि जातका बाख्राहरू लोकप्रिय हँु दै गएका छन् । विदेशी मूलका केही बाख्राहरू नेपाली जातका बाख्राहरूको नश्ल सुधारका लागि पनि प्रयोगमा ल्याइएका छन् । विदेशी जातका केही मुख्य मुख्य बाख्राहरू निम्न हुन्ः
a) जमुनापारी यो भारतीय मूलको सबैभन्दा ठूलो, अग्लो जीउडालको लोकप्रिय जातको बाख्रा हो । यस जातको बाख्रा मासु र दूध उत्पादनको लागि उपयुक्त मानिन्छ । लामो लामो तुरलुङ्ग झुन्डिएको कान, लामो अग्लो गोडा, सुगाको जस्तो नाक, देख्नमा भव्य, पछाडिको फिलामा लामो लामो रौं यस जातको विशेषता हो । वयस्क बोका ५०–६० किलोे वजन गरेको हुन्छ । बाख्रा ४०५–५० किलोकी हुन्छे । उन्नत तरिकाले पालेमा जमनापारीको खसी ९० किलोसम्मको हुन्छ । यस जातको बाख्रीले वर्षमा एकपटक र एउटै मात्र बच्चा जन्माउँछ । बाख्रीले एक दिनमा २.५ लिटर दूध दिन्छ । छ महिनामा पाठाको तौल करिब १५ किलोको हुन्छ । ठूलो जीउडाल, बढी दूध, छिटो हुर्कने तथा जङ्गली घाँसपातमा पनि राम्ररी जीवन निर्र्वाह गर्न सक्ने भएको हुँदा नेपालमा यस जातको बाख्रा निकै लोकप्रिय भएको छ । नेपालमा यस जातका बाख्राहरूलाई १०००–१२०० मिटरसम्मको उँचाइमा पाल्न सकिन्छ । यस जातको बाख्रा कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बन्दिपुर तथा धनगढी बाख्रा फार्ममा पालिएका छन् । स्थानीय जातका बाख्राहरूको नश्ल सुधारका लागि सरकारी स्तरमा यस जातका बोकाहरूको प्रयोग गरिन्छ ।
b) बारबरीः सानो गठीलो जीउ गरेको, रातोमा सेतो टाटापाटा परेको यो अफ्रिकी मूलको बाख्रा हो, झलक्क हेर्दा मृग जस्तो देखिन्छ । घरमा बाँधेर पाल्न यस जातको बाख्रा निक्कै उपयुक्त हुन्छ । यो मासु तथा दूध उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । वयस्क बोकाको तौल ३७–४० किलो र बाख्रीको तौल २२–२५ किलो हुन्छ । एक बेतमा २–३ वटा बच्चा ब्याउँछन् । यिनीहरूले एक बेतमा २२५ लिटर दूध दिन्छन् । वर्षमा दुई पटक ब्याउँछन् । दूध बढी दिने, सानो चिटिक्कको जीउ, धेरै बच्चा ब्याउन र हुर्काउन सक्ने तथा स्वादिलो मासु हुने भएकोले नेपालको तराई क्षेत्रमा यस जातको बाखा निकै लोकप्रिय रहेको छ । नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९६६ मा इजरायलबाट यस जातका बाख्राहरू झिकाइको थियो । यस जातको बाख्रा धनगढी स्थित बाख्रा विकास फार्म, बुढीतोलामा पालिएको छ । सरकारी स्तरमा पनि स्थानीय जातका बाख्राहरूको नश्ल सुधारका लागि यस जातका बोकाहरू वितरण गरिएका छन् ।
c) बोअर बाख्रा- यो अफ्रिकी मूलको मासु उत्पादनका लागि विश्व प्रशिद्ध जातको बाख्रा हो । उन्नत तरिकाले पालनपोषण गर्दा बोअर बाख्राको शारीरिक वृद्धिदर सबै बाख्राहरू भन्दा बढी दैनिक २०० ग्राम सम्म पाइएको छ । यिनीहरूको रङ्ग प्रायः सेतो र टाउको केही रातो हुन्छ । वयस्क भाले ९०–१३० किलो र पोथी ८०–१०० किलोसम्मकी हुन्छ । यसको बोका ६ महिनामा र पाठी १० महिनाको उमेरमा गर्भाधारण गर्न योग्य हुन्छन् । साला खाला बाखीले एक पटकमा दुई पाठापाठी ब्याउँछ र दुई वर्षको अवधिमा तीन पटक ब्याउँछ । जन्मदा नै यसका पाठापाठीहरू ३–४ किलाका हुन्छन् । पाठापाठीहरू तीन महिनाको उमेरमा २५ – ३० किलोका हुन्छन । बोअर बाख्रालाई तराई तथा मध्य पहाडीक्षेत्रमा सफलतापूर्वक पाल्न सकिन्छ । यो बाख्रा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले २०६५ साल देखि परीक्षण शुरु गरेको छ । नीजि स्तरमा केही बाखा फार्मे बाग्मती बाख्रा फार्म तथा अन्यले पनि बोअर बाख्रा पाल्ने गरेका छन् ।
d) सानन्ः बाख्रा दूध उत्पादनको निमित्त यो विश्वविख्यात जातको बाख्रा हो । यस जातको बाख्राको उत्पत्ति स्वीटजरल्यान्डमा भएको हो । यिनीहरूको रङ सेतो वा नौनी जस्तो हुन्छ । कान ठाडो तथा चनाखो देखिन्छ । सिङ्ग प्रायः उम्रन्न । बोका तथा बाख्री दुवैमा चुस्स दाह्री उम्रेको हुन्छ । वयस्क बाख्रीको तौल ७५ किलो र बोका ९० किलोको हुन्छ । पहिलोपटक ११–१२ महिनाको उमेरमा ब्याउँछ । ब्याएपछि ८–१० महिनासम्म दूध दिइरहन्छ । यिनीहरूले एक दिनमा दुई देखि पाँच लिटरसम्म दूध दिन्छन् । दुधमा करिब ४ प्रतिशत प्mयाट पाइन्छ । यस जातको बाख्राको दूध उत्पादन क्षमता बढी भएकोले यो बाख्रालाई बाख्रा जगतकी दूधकी रानी “मिल्क क्विन अफ गोट वर्ड” पनि भनिन्छ । सर्वप्रथम यस जातको बाख्रा २०२३ साल (सन् १९६६) मा इजराइलबाट नेपालमा झिकाइ स्थानीय जातको बाख्राको दूध उत्पादन क्षमता बढाउन प्रयोगमा ल्याइएथ्यो । नेपालमा १५००–२५०० मिटरसम्मको उँचाइका क्षेत्रमा पालन गर्न यस जातको बाख्रा उपयुक्त देखिएका छन् । यस जातको बाख्रा हाल चितलाङ तथा पाँचसयखोला फार्ममा पालिएका छन् ।
e) अँगोरा- यस जातको बाख्रा विशेषगरी मोहेयर को लागि पालिन्छ । मोहेयर, रेशम जस्तो नरम रौँ हो । यस्तो रौँ अङगोरा बाख्राको शरीरमा जाडो मौसममा उम्रने तथा गरममा झर्ने गर्छ । मोहेयरबाट उच्चकोटीको गरम कपडाहरू बनाइन्छ । अङगोरा बाख्राको मूल थलो हिमालय क्षेत्र भएतापनि यसको उत्पत्ति टर्कि तथा एसिया माइनर भएको अनुमान गरिन्छ । वयस्क बोकाको तौल ६०–८० किलो र बाख्री ४०–५० किलो वजनका हुन्छन् । एउटा बाख्राबाट सालाखाला प्रतिवर्ष ३ किलो मोहेयर उत्पादन हुन्छ ।